Amaxesha amancinci kunye neehambo zabaThengi | Martech Zone
IiMicro-Moments neehambo zabaThengi
NgoMvulo, Agasti 24, 2015 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Umzi mveliso wokuthengisa kwi-Intanethi uyaqhubeka nokwenza inkqubela phambili ekuboneleleni ngetekhnoloji eyenza ukuba abathengisi bakwazi ukuqikelela kunye nokubonelela ngeemephu zendlela ukunceda abathengi kunye namashishini aguquke. Senze uqikelelo ukuza kuthi ga ngoku, nangona kunjalo. Umxholo oqhelekileyo wee-personas kunye ne-funnels yokuthengisa i-porous kwaye iguquguqukayo kunokuba sasicinga.
I-Cisco ibonelele ngophando lokuba umndilili wemveliso ethengiweyo ineendlela ezingaphezu kwe-800 ezahlukileyo zabathengi ezikhokelela kuyo. Cinga ngezigqibo zakho zokuthenga kunye nendlela ohlawula ngayo phakathi kophando, i-intanethi, ivenkile, i-imeyile, ukukhangela kunye nezinye izicwangciso njengoko uqhubeka usendleleni eya kwisigqibo. Akumangalisi ukuba kutheni ukuthengisa kunye nokuthengisa abaqeqeshi bayasokola nokunikezelwa kakhulu. Kwakhona esinye isizathu sokuba kutheni Intengiso ye-omni-channel kufuneka yenziwe ngononophelo ukuphucula iziphumo.
Ukuba unokuqikelela kwaye ubonelele ngentengiso eyandulela uhambo lomthengi, unokunciphisa ukungqubana kwaye ubakhokelele ekuthengeni ngokufanelekileyo. Ngapha koko, uphando oluvela eCisco lubonisa ukuba abathengisi ababonelelayo I-Intanethi yayo yonke into amava inokubamba ukuphuculwa kwenzuzo ye-15.6.
Dibanisa ezi zinto zifunyanisiweyo kunye Cinga ngeMicro-Moments zikaGoogle uphando kwaye sishiywe ngamaxesha ama-4 amancinci ekufuneka wonke umthengisi athathele ingqalelo:
Ndifuna ukwazi amaxesha -I-65% yabasebenzisi abakwi-Intanethi bajonge ulwazi ngakumbi kwi-Intanethi kunakwiminyaka embalwa edlulileyo. I-66% yabasebenzisi be-smartphone bajonge phezulu kwinto abayibonileyo kwintengiso kamabonwakude.
Ndifuna ukuhamba amaxesha - I-200% inyuka kuphando "kufutshane nam" kunye ne-82% yabasebenzisi be-smartphone basebenzise injini yokukhangela ukukhangela ishishini lendawo.
Ndifuna ukwenza amaxesha -I-91% yabasebenzisi be-smartphone baphendukela kwiifowuni zabo ukufumana izimvo ngelixa besenza umsebenzi kwaye ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeeyure zokuthi-umxholo ubukelwe njani kwi-YouTube ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Ndifuna ukuthenga amaxesha -I-82% yabasebenzisi be-smartphone badibana neefowuni zabo ngelixa ivenkile ithatha isigqibo sokuba ithenge ntoni. Oku kubangele ukonyuka kwama-29% kumanqanaba okuguqula iselfowuni kunyaka ophelileyo.
Ngelixa uGoogle egxile kumsebenzisi oselfowuni, kuya kufuneka uqaphele ukuba oku kuchaphazela njani lonke uhambo lwabathengi-ukusuka ekufumaneni ukuya kwi-upsell okanye ukuvuselela nje. Inyani yile yokuba kufuneka sibe ngcono ngakumbi malunga nokujolisa kumxholo oqhuba ixesha lokuthenga. Yongeza abantu iindlela zokufunda kwaye izinto ezikhuthaza ukuthenga kwaye ayimangalisi into yokuba kutheni abathengisi besokola ukuvelisa umxholo oqhuba uguquko. Uhlalutyo alunikezeli ngengqondo kwezi kwaye kutheni abathengisi bomxholo bejonge kulwazi ngakumbi izisombululo zokuqikelela kunye nokulinganisa ukusebenza komxholo wazo.
tags: imbekoi-ciscoUkuThengiswa kweMpahlaguqukauhambo lwabathengiNdifuna ukuthengaNdifuna ukwenzaNdifuna ukuhambaNdifuna ukwaziIxesha elincincimicromomentscinga noGoogle
Loluphi uhlahlo-lwabiwo mali olufanelekileyo njengepesenti yengeniso?
I-Boomtrain: Ubukrelekrele boomatshini abakhelwe abathengisi